लगानी बोर्डको सिइओमा भट्ट « Postpati – News For All
लगानी बोर्डको सिइओमा भट्ट
साउन २०, काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा सुशील भट्ट नियुक्त भएका छन् । भट्ट खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सिइओ नियुक्त भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले भट्टलाई आगामी चार वर्षका लागि बोर्डको सिइओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका भट्टसँग व्यवस्थापन, बैंकिङ, इन्जिनियरिङ तथा योजनाको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । उनी नेपाल व्यवस्थापक संघ, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनलगायतमा आबद्ध छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वको सिफारिस समितिले रामकृष्ण खतिवडा, सुशील भट्ट र डा. सरोज कोइरालाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । यी तीनमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले भट्टलाई नियुक्त गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने यो बोर्डलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गरी पूर्वाधार संरचना क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी परिचालन गरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेबारी तोकिएको छ । बोर्डमा विभिन्न विभागीय मन्त्री, गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिवलगायत सदस्य रहन्छन् ।
तत्कालीन सिइओ महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त भएपछि यो पद रिक्त थियो । सिइओ पदका लागि सुरुमा १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । १२ जनामध्येबाट पाँच जनाको सर्टलिस्ट तयार गरी अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमार्फत छनोट गरिएको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
२०७७ श्रावण २०,मंगलवार को दिन प्रकाशित